3.REALR INC Medical Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2019 ……
Ultra picosecond dia fitaovana sandoka manokana amin'ireo fitaovana laser ao an-toerana, izay manambatra ny fanesorana ny freckle, ny fanalefahana ny hoditra ary ny fanasana tarehy. Super picosecond dia novokarin'i Sinoron sy h ...
2.REALR INC Medical Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2019 ……
Na dia mihantitra amin'ny fahanterana aza ny fahanterana dia misy vokany eo am-bohoka izany ary ny fihenan'ny fahanterana dia vokatry ny fahazaran-dratsy ratsy maharitra. Inona àry no fahazaran-dratsy hanafaingana ny fahanterana? Ahoana no ahafahantsika misoroka ny fahanterana? Andao jerena akaiky. ...
1.REALR INC Medical Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2019 ……
REALR INC Medical Technology Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2019 ， Manana andrim-pitsaboana matihanina sy orinasa ofisialy, Misy andrim-panjakana maro miasa any Shina sy Etazonia, ny orinasanay dia nividy fitaovana ara-pitsaboana vaovao na faharoa.